Dowlado iyo Hay’ado caalami ah oo joojiyay kaalmadii ay siin jireen Dowladda Soomaaliya. – MANABOLYO NEWS
Mas’uuliyiintaan ayaa sheegay in arrintaan ay ka dambeyso khikaafyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo qabsoomid la’aanta doorashada. Sidoo kale mas’uuliyiintaan ayaa sheegay in arintaan ay ka dambeysay kadib cabashooyin badan ay gudbiyeen mucaaradka iyo maamul gobaleedyada dalka.
Khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid ka tagaya raadad xun iyo guuldarrooyin dhaqaale oo aan laga soo kaban karin, waxaana laga cabsi qabaa inuu sii xoogeysto haddii aan xal deg deg ah laga gaain.
Inaa lilaah wa inaa ileehi raajicuun Maxamuud Maxamed Qasaaye oo saakey kugeeriyoodey Magaalaga Muqdisho
Farmaajo oo saaxiibadii u sheegeeyn inuu is casilo kadib markii awoodiisa yaraatey